I-Matte emnyama yitsale ityafa lasekhitshini
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Tsala iiFaucets / WOWOW Matte oMnyama oTsala-ezantsi weFrayitethi yasekhitshini
ikaliwe 4.80 Kwi-5 esekelwe kuyo 20 amanqaku umthengi
(20 ncomo ngumthengi)
Itechet emnyama ekhitshini emnyama esemgangathweni
I-WOWOW inamava oshishino ekwenzeni olona tshintsho lubalaseleyo kumnyama olususwe ekhitshini ukusukela ngo-2008. Ngaphandle kwamathandabuzo la mava aqatshelwe ngokusebenza kunye noyilo lokudonsa isitofu sekhitshi laseWOWOW. Ngenxa yolu lwazi uqinisekiswa ukuba unezona faucet ezisemgangathweni ekhitshini, eziyilelwe ukusebenza ngokuphezulu kwaye ekugqibeleni ziyilo olwahlukileyo. Ngesi sizathu, eli xabiso liphezulu le-arc mate emnyama liyekwe ezantsi ikepusi ye-WOWOW lolona khetho lufanelekileyo xa uyila okanye unikezela ikhitshi lakho kwakhona.
I-SKU: 2310700B iindidi: IFaucets yasekhitshini, Tsala iiFaucets tags: IArc ephezulu, Matte Black, Yehlisa
Nksk2020 / 10 / 7
Umyeni wam unokontraka wemibhobho yamanzi kwaye ukhetha kakhulu malunga neefompu esinazo ekhaya. Le yeyethu i-RV esiza kuhlala kuyo unyaka wonke ngelixa sisakha ikhaya lethu elitsha, ke ngoko khange sifune ukuhlawula i-200 + yeedola ngombhobho omnyama okhangeleka umnyama kwivenkile yokuphucula ikhaya lethu. Ukwazi ukuba ndingayibuyisa ukuba siyayithiya kwaye ibiyingxubevange, ndaye ndathatha ithuba kwaye ndathenga oku ngokuchasene nezilumkiso zomyeni wam malunga "neepompo ezingabizi kakhulu" kwaye siyayithanda sobabini! Ubungakanani kunye nesikali sigqibelele i-RV kwaye siyabuthanda ubunzima obunzima bokubamba isitshizi. Umyeni wam usifakile ngaphandle kwemicimbi kwaye sobabini simangalisiwe kumgangatho olungileyo wokutshiza, amaqhosha okutshintsha Ukutshintsha ukusuka kutshizi ukuya kumjelo nkqu nakwiqhosha lokumisa lokumisa kwintloko yokutshiza (ilunge kakhulu), isiphatho esijika sivule kwaye sicime kunye nesiphelo somntu omnyama esisebenza nzima. Yithande nje kwaye yayixabise kakhulu !! Ndingacebisa!
Ndayalela oku ukuba kuthathe indawo yombhobho ovuthayo wentamo yegumbi kwigumbi lethu loncedo. Sasifuna enye enokutsala umlomo kodwa sasingafuni ukuchitha ngaphezulu kwe- $ 100 kwenye esasijonge kuyo kwiivenkile ezinkulu. Uyibonile le kwaye uthathe isigqibo sokuyizama.
Kwakulula kakhulu ukuyifaka. Zonke izihlanganisi zazibandakanyiwe ngaphandle kokuba bendifuna eyahlukileyo ngenxa yezivalo zokucima / zokucima endinazo. Yonke enye into ibonelelwe kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Imiyalelo ibikwiphawu. Ndifundile ukuba abanye banengxaki kushushu / kubanda ukubuya umva ukusuka kwinto yesiqhelo. Qhoboshela nje imigca yakho eshushu / ebandayo yamanzi ujongene nokungahoyi ubhalo kulawulo lokucima / lokucima njengoko ungaboniyo ngaphandle kokuba ulijongile kwicala. Emva koko uya kuba nolawulo njengesiqhelo.
Umjelo ulungile kwaye unamandla kuwo. Thanda ukutshiza kwaye uthobe umbhobho ukuze iipani ezinkulu kunye neembiza ezinkulu zesuphu zihlanjwe kwaye zihlanjwe lula. Kukhulu ngokuhlamba ngamanzi isinki yethu enkulu kunye nenzulu. Ngokubanzi ndonwabile yile faucet. Iwaranti yonyaka emi-5 nayo ilungile. Ndingacebisa le mveliso kubantu endibaziyo. Imveliso enkulu.
Sathenga i-remodel yethu yasekhitshini kwaye sasifuna ukuphuma ngenkangeleko yokutshontsha engenasinxibo kunye neekhabhathi zethu zineenkcukacha zethambo ezimnyama ze-espresso. Ke le yayiyinto entle kakhulu ekhitshini lethu. Ukufakwa kwakulula, umyeni wam efakwe malunga nemizuzu engama-45. Ngokuqinisekileyo ngekhe kuthathe ixesha elincinci kodwa isinki yethu yakudala kunye nompompo apho kufanelekileyo ukuphuma. Inamandla amnandi xa. ukudubula amanzi kunye neqhina kulula ukulungelelanisa amanzi ashushu nabandayo ndinqwenela ukuba ibinkulu kancinci. Ukutsala kwakhona kubuyela umva ngokulula. akukho sidingo sokuyityhalela emva ngesandla. Ukugqitywa kujongeka kulungile, hayi ukukhohlisa. Hlala ubukele imifanekiso ehlaziyiweyo xa kugqityiwe ikhitshi.
Ndiyayithanda uthando le faucet! Kwakulula kakhulu ukuyifaka, yathatha kuphela malunga nemizuzu emi-5 ndakube ndiyisusile itepu endala. Elona candelo linzima ekufakweni kukususwa kwale yangaphambili. Imikhombandlela yayicacile, ndathanda ukuba inomzekeliso wenyathelo ngalinye. Ikhitshi lam lahlaziywa kwangoko kwaye ndonwabile kakhulu ngale nto ndiyithengileyo! Ibifikeleleka kakhulu, ibonakala ikumgangatho, ndiyakuthanda ukugqitywa kwe-matte. Lumka, iminwe iyabonakala ngakumbi kodwa icinywe ngokulula. Yeza ipakishwe kakuhle kwaye ngaphambili kunokuba bekulindelwe. Akukho nto imbi ukuyithetha ngale mveliso, sendicebisile ukuba abanye babini kwaye bobabini bayithengile. Ndifuna ukuthumela umfanekiso kodwa kubonakala ngathi akusavumelekanga ngophononongo. Kubi kakhulu kuba kujongeka kukuhle!
Ukuba ngumfazi ongatshatanga, oku kwakulula njengoko kufunyanwa. Akukho zixhobo zifunekayo ngaphandle komsonto kwaye yayikukuqinisa ibhawuda yomgca wamanzi.
*** l2020 / 10 / 15
Ekugqibeleni sitshintshe itompu yethu yasekhitshini. Kudala ndikhangela ixesha elithile kwaye ndabona obu buhle. Ixabiso eliphantsi lenze ndathandabuza kodwa uphononongo lusomeleza isigqibo sam sokuthenga. Kwaye uphononongo luchanekile. Impompo yinguqu entle ekhitshini lethu kwaye igcwele izinto ezintle. Thanda ukutsala isitshizi kunye nokukwazi ukutshintsha ufafaze. Ukufakwa kwakulula ngokulula kwaye sasingenayo imiba. Ngokwenyani bafuna abantu ababini ukuba basuse itompu endala kwaye bafake entsha. Yenza ufakelo lube lula. Impompo yeza kakuhle ibhokisi kwaye onke amalungu afakiwe. Kukuthenga okungathandekiyo! Awunakuhamba gwenxa ngesiqinisekiso seminyaka emi-5. Bona imifanekiso, ngaphambi nasemva. Umahluko omhle kangaka !!!!
*** k2020 / 10 / 18
Ndaye kwintengiso yompompo omtsha njengoko eyam yaqala ukuvuza kwisiseko. Ndindwendwele zombini iLowes neKhaya Depot kwaye oko kwangqineka kuyinkcitha xesha. Ndizimisele ukuba liphi ixabiso lam kwaye abo bakuloluhlu bajonge kwaye beziva ngathi iipompo ze-junk ezingabizi kakhulu, ezinje ngento endiyitshintshayo. Bendilumke kuzo zonke uphononongo lweenkwenkwezi ezi-5 eAmazon, nangona kunjalo ndenze isigqibo sokutsala umphumo ngokusekwe koko kuva ngathi kukuphononongwa ngokunyanisekileyo. Ngombulelo ngokwaneleyo, xa kuvavanywa itompu, bendisazi ukuba ndenze ukhetho olufanelekileyo.
Ngokusebenzayo, inayo yonke into endiyifunayo kwimpompo yokutshintsha. Andiqinisekanga ukuba ingabonakala njani imnyama ngombala, kodwa ndonwabile ukutsho, ijongeka intle kwisinki yam yesilivere. Impompo yazo kunye nazo zonke izixhobo eziza nazo zivakalelwa ngendlela esemgangathweni. Andingombumbi ngemibhobho yamanzi, nangona kunjalo khange ndibenangxaki yokufaka le faucet ngokwam. Ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam kwaye ndingayincoma kakhulu nakubani na.
Ndibeka le faucet malunga neeveki ezi-2 ezidlulileyo, kwaye ukuza kuthi ga ngoku akukho ngxaki kwaye isebenze kakuhle. Ikwabonakala intle. Ukufakwa kwakulula kakhulu. Ukuhamba okungcono kwamanzi kuneDelta endala endaweni yayo. Kubonakala ngathi umgangatho olungileyo. Ine-swivel ekunene entlokweni yesitshizi ekuvumela ukuba ubenendawo yokutshiza ngokulula. Ifike yafakwa kakuhle kwigwebu elingqingqwa ukukhusela ukuthunyelwa komonakalo. Kucetyiswa kakhulu.
Umgangatho ophezulu, ukugqiba okuhle, kulula ukuyifaka… uninzi lweengcinga kunye nobunjineli zingene kolu sana. Ndincoma kakhulu! Ukubukeka okunesitayile kakhulu okwangoku. Nawuphi na umntu ofumana ubunzima besitshizi esibetha imibhobho phantsi kwesinki xa uthoba isitshizi… fumana iphepha lezinto eziqinileyo… bendisebenzisa uhlobo lweplastikhi yohlobo lweplastiki .. lusongele ngokukhululekileyo ujikeleze ilogo yethumbu eguqukayo kwaye uyivale njengekhowuni ukumila, ndisebenzise umngxunya wenqindi kwimpahla yesikolo yakudala yonyana wam kwaye ndenza imingxunya emibini malunga ne-intshi enye ukwahlukana..sisongele iqhina ndaza ndalisusa ukhuko ... ndenza imingxunya emibini kwicone ukuze ndikwazi ukukhusela imithombo emanzini umbhobho kunye ne-whalaa, ubunzima buyehla nje buye ezantsi ngaphakathi kwendawo ye-placemat sleeve / ikhowuni ... akusayi kubetha ubunzima ngokuchasene nombhobho wokuhambisa amanzi ... kusebenza kakuhle… ukulungiswa okuncinci okusebenzayo kuloo ngxaki. Kwakhona, le tephu iyamangalisa… .awuyi kuphoxeka.
Ndayithenga le faucet njenge faucet yethutyana xa indala yam yaphuka, ndilindele ukuyitshintsha xa siqala ukulungiswa kwekhitshi yethu ekwindla. Ndonwabile kakhulu kwaye iya kuhlala! Umyeni wam uyifakile ngokulula kwaye ijongeka ngathi iyabiza. Inkqubo etsala ukutshiza okurhoxiswayo kufuneka ingaphazanyiswa phantsi kwesinki yakho okanye uya kuba nemicimbi yokuphinda ubuyele endaweni yayo. Ukuba uqinisekisa ukuba kucacile ukuhamba, akukho micimbi kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Unyana wam wenza remodel kwaye wayithanda kakhulu eyethu ke ndamthengela enye yezi. Ndiza kufumana enye xa sisenza i-remodel yethu ye-sink sink yethu, kuba le ayizukubekwa endaweni! Yithande!
Ndiyithengile le emva kokujonga iivenkile ezinkulu zeBhokisi ndisebenzisa itompu kwaye ndiqonda ukuba andifuni ukuhlawula imali eninzi ngombhobho. Ndothuke kamnandi kumgangatho wale nto ukufika kwayo. Kwakukupakisha okufana neefomfethi eziphezulu zohlobo. Liqinile, lenziwe kakuhle. Ndiyayithanda inkangeleko yayo kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Inezinto ezithile ezintle; Ukucofa kunye nokucofa iqhosha lokutshiza kunye nohlobo lokukhetha ukutshiza. Ndingacebisa oku kuye nakubani na okhangela indawo yebhakethi ekhangela ukuziva okuphezulu kunye nomgangatho. Ukufakwa kwakukhawuleza kwaye kulula kakhulu.
Ukuqala ukwenza kwakhona indlu entsha ngaphambi kokungena kwaye omnye wemisebenzi yokuqala yi-counter enekhitshi elitsha lesinki yesixhobo. Iivenkile ezinkulu zebhokisi ngokuqinisekileyo zindoyikisile ngexabiso labo eliphezulu. Ndiqale ukujonga ukuya kwam kwivenkile enkulu yebhokisi e-amazon kwaye ndafumana ukhetho olunamaxabiso angcono. Le faucet iziva yakhiwe kakuhle. Ukugqitywa kwe-matte kuhle kwaye akubonisi zigxina zeminwe. Inzima kwaye ke ngoko iziva yomelele kwaye yomelele. Inxalenye kuphela yeplastiki kuyo yindawo yokuhlala yombhobho ekupheleni kwethumbu. Iza nemiyalelo kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko. Ndiza kuhlaziya ngomfanekiso nje ukuba kufakwe iincopho zokubala.
Le mveliso iyamangalisa! Ndiyifakile ngempelaveki ekhitshini lethu - itepu yethu yakudala ukusuka kumashumi eminyaka eyadlulayo yayifuna ukubuyiselwa kakubi. Uninzi lwekhitshi lethu belihlaziyiwe ikakhulu ngaphandle kwesinki. Yayibuchwephesha obuncinci ngenxa yendawo yam yokuntywila ukuzama ukufumana yonke into encanyathiselweyo, kodwa yonke into iqhotyoshelwe ngokulula kwipompo ngokwayo kwaye isebenza njengoko kufanelekile. Ndiyabuthanda ubuchule bokutshintsha ngokulula phakathi kokuhamba kwamanzi okuzinzileyo kunye nesitshizi- akusayi kuphinda kubekho ithumbu elihlukileyo lesitshizi! Umbhobho omkhulu ubukeka umhle ekhitshini lethu - sinendawo emnyama yokubala kunye nomnye umva omnyama. Ihambelana ngokugqibeleleyo!
Le faucet ukuza kuthi ga ngoku ixabisa iindleko. Kunzima ukufumana itompu emnyama emnyama engabizi kakhulu. Kwakulula ukuyifaka. Ndibaleke ndangena emxholweni ngesiqwengana esinezikrufu ngaphantsi kuba imisonto ibingadibani kodwa inkonzo yabathengi ibilungile kwaye indithumele entsha. Bebelungile ekusebenzeni nabo. Ndiziva ndiqinisekile ukuba bazakuqhubeka nokunceda xa kukho into engahambanga kakuhle.
Ukuphela kwento endiyithandayo ngale faucet kuxa uya kwimowudi yokutshiza kwaye ucime amanzi, ayibuyeli kwimeko yesiqhelo. Ayisiyo isiphelo sehlabathi okoko ive ndisiqhele ukuyibuyisela umva ngaphambi kokucima amanzi kodwa oku kunokuba yinto ecaphukisayo kwabanye.
Ndicela kakhulu ngoku kuthengwa itephu yombhobho. Ndisandul 'ukulungiswa ikhitshi lam, kwaye le faucet ilungele ikhitshi langoku. Ijongeka kwaye iziva ilungile, isebenza ngokugqibeleleyo, kwaye ndiyayithanda into yokudonsa. Umbhobho owahlukileyo okombala omnyama ngombala, ngombhobho osuswayo wokutshiza. Ukuchukunyiswa ngumgangatho, kunye nomsebenzi. Iza kunye nokulandela ngokulula imiyalelo, kunye nemiyalelo eneenkcukacha kunye nenkxaso evela kwinkampani. Ixabiso elikhulu ngexabiso.
Ndithenge le matt emnyama ukuze itshatise isinki yam emnyama yegranite. Ijongeka intle. Umsebenzi kunye neenkangeleko zifumana iinkwenkwezi ezi-5. Isizathu sokuba ndiyinike isine kuphela, nangona kunjalo, kuxa kusetyenziswa ukutshiza, amanzi aya KUYO YONKE indawo apho… kwaye ndithetha ukuba kuyo yonke indawo. Kwaye emva kweeveki nje ezimbalwa zokucima amanzi, iincinci ezincinci zentsimbi zibonisa ukugqiba.
Ukufakwa ngokulula kwaye itepu ibonakala ingumgangatho omkhulu. Ekuphela kwento endiyibhalayo yile ntloko yiplastikhi hayi isinyithi. Ndiyathemba ukuba iya kubamba ixesha elide. Ipakishwe kakuhle kwaye ngoluhlobo kukho iwaranti yeminyaka emi-5. Ixabiso elikhulu lilonke kwithegi encinci yamaxabiso!
Ndiyayithanda itephu yam entsha! Isebenza kakuhle ukuza kuthi ga ngoku. Ngaba umntu oqeqeshelwe ukusebenza ngemibhobho yamanzi ukuyifaka ukuze aqiniseke ukuba ifakwe kakuhle. Ngethemba lokuba iya kuhlala ixesha elide kakhulu. Siza kuhlela ukuba iqala ukuvuza okanye ukuntywila.
Nksk2020 / 12 / 29
Kufike phantse ukuhlangana ngokupheleleyo. Ukudityaniswa kwamanzi bekumgangatho olungileyo, itompo ibonakala isebenza kakuhle Kwaye ndiyayixabisa ibhegi encinci yamacandelo okusonga (afana nerabha o amakhonkco nokunye okunje kuza nayo.
ndihlaziya uphononongo lwam lwangaphambili. Ipeyinti emnyama yaqala ukucima kwisiseko emva kweenyanga ezingaphantsi kwe-6, kodwa inkampani yathatha indawo yepompo phantsi kwewaranti. Sithanda ukusebenza kunye nesimbo setephu.